Mythology kunye neenkwenkwezi
Ukufundwa kweenkwenkwezi ngumbono ongokomqondiso, ukucinga ngendoda kunye nendalo yonke. Ukufundwa kweenkwenkwezi kukuvumela ukuba siqonde ngokwayo, kwaye ngokuphambene, xa sifunda isikhala sangaphandle, sisondela kukuziqonda. Indoda ihlala ibuza yona indlela ubuhlobo phakathi kwamaqumrhu asezulwini kunye nomntu ekhula ngayo. Ngokutsho kweenkwenkwezi zaseYiputa, isibhakabhaka sahlula "amaqhekeza" eesisigidi ezilishumi, ekugqibeleni sagqiba iingu-36, kunokuba zibonakalise iimpawu ezilishumi elinesibini. EMpuma, ukubhula ngezinkanyezi kwakuhlala kwindawo ebalulekileyo. Uphawu lwesiTshayina lwemikhosi yezulu yintlanzi.
Kwimpucuko yamaGrisi-Roma, ihlabathi lijongene nokuqhagamshelana ngokuthe ngqo kwenkwenkwezi. I-Roman pantheon eneempawu ezi-7, ezona zizithixo ezisixhenxe zeplanethi, ibonisa lo mbono wehlabathi.
U-Svetlu uhambelana noothixo uApollo, owabonakaliswa ngolu hlobo lwendawo ekhanyayo, iliso elivuthayo likaThixo, inqwelo yomlilo. Ngomnsalo nentsimbi ezandleni zakhe, ungumthunywa wokukhanya kunye nenyaniso. I-Svetlilo-tsar yenye yezinto ezibalulekileyo zeenkwenkwezi. EYiputa nguRa. Kuba umlawuli wasendulo we-Zodiac uthathwa njengengqondo ephezulu. EIndiya, inkolo yeLanga idityaniswe neVedas, kukho inkwenkwezi imelwe nguMoya Atman.
Nangona eGrisi unkulunkulu weLanga nguHelios, akayena phakathi kwabemi abakhulu be-Olimpiki. Ukulawula inqwelo yakhe, wawela iMpuma ukuya eNtshona. I-Helios yaxoshwa uApollo. Wayengunkulunkulu welanga, kungekhona ilanga ngokwakhe. U-Apollo uthathwa ngokuba ngumgcini we-fortune, abagulayo, iziprofeto kunye nezibikezelo, unkulunkulu wokucula nomculo, ojongene namaMuses. Ngeenkwenkwezi, i-Sun iquka ngaphakathi "I".
Ihlabathi lilawulwa yiNyanga okanye uArtemis. Le khanyiso yindlela yokubonakalisa umgaqo wesetyhini, umongameli. Impembelelo yayo iyabonakala, kuba izigaba zenyanga zidala ukunyuka kwenyanga kunye nokukhula kwimihla ngemihla kwizilwanyana kunye nezityalo. Kumntu umlingo wakhe omlingo uletha amaphupha, uthando kunye nobudlova.
EBhabhiloni, inkolo yakhe ixhamnwe ngumntu wesintu uShin. Kwiingoma ze-Greco-Roman, ezi zigaba ezintathu zeNyanga zenziwe ngabantu abathandathu. Inyanga epheleleyo yi-Selena, iquka umgaqo ophezulu ofana neLanga. Abadala babekholelwa ukuba ngelo xesha inkwenkwezi yasebusuku yazaliswa yimiphefumlo yabafileyo. E-Indiya, inxulumene nokukhanya, intuition, ubulumko. Ubumnyama benyanga babonakalisa iHecate. Wayesatshiswa kwaye wahlonishwa, wanikwa isipho samaqebelengwane abhakawa ngolu hlobo lwenyanga.
INyanga eNtsha ityathwa ngoArtemis. Ikhusela abantwana, umtshato, amanzi, izityalo. Uthikazikazi wobumsulwa, uthathwa njengongumntu ophethe "igolide elisho", ebonisa ukuguqulwa kwezinto ezithandayo.
I-Mercury yayithathwa njengomthunywa wothixo. Ulawula izixhobo zobuchule. Abantu abaxhaswa yilo polani, babe nengqondo yokuhlalutya, ukuhamba, ukukwazi ukulungelelanisa. I-Hermes ifanekisela ulutsha kunye noxolelwano. I-Mercury iyisithunywa sothixo. Ngombulelo kuye, i-alfabhethi yaqulunqwa, waqulunqa uqwalaselo lomculo kunye neenkwenkwezi. I-Vastrology iyayisebenzisela i-Twins, ibanike ukuxhamla kwengqondo nezandla, ukuthambekela kwezobugcisa, ukunambitha umdlalo. I-Mercury - iplanethi yengqondo ethile, ngoko ke, ihlala ichasa ukufunyanwa kwezinto ezingabonakaliyo. EYiputa, i-Mercury inxulumene nenkolo kaThoth, uthixo wobulumko, i-India ye-India yiBuddha.
Le planethi ibonisa ubuhle. Lo mqondiso wothando wesibini, unkulunkulukazi woLuthando kunye noBume, ukukhangwa kunye nesimo sendalo, yonke into ehambelanayo kunye nenhle. Enye yeentlobo zothando zihambelana nePandemos, yiVenus uMhlaba, eyahlula iTaurus ekuthandeni ubuhle kunye nobugcisa, ukukhanga, umnqweno wokufumana; zibonakaliswa ngothando lwabantwana, iintyatyambo, izilwanyana, umculo, njl. Olunye uhlobo lothando luhambelana noVenus waseZulwini, umphathi weLibra.
EYiputa, unkulunkulukazi wothando wayenguHathor, wayebhekwa njengenkomo enkulu ye-cosmic, owayegqoka iinkwenkwezi kwesikhumba sakhe, kwaye ilanga laliphakathi kweempondo.
I-Mars yindoda enamandla, isimboli sezenzo, izixhobo, isibindi. Uyayigxina isiyalo, umzabalazo wesigqibo esifanelekileyo.
I-Mars isoloko idibaniswa kuphela nemfazwe, eGrisi yamandulo, ibiza igama elithi Ares. Kwiingcamango zikaMars, oonyana ababini be-Phobos (i-horror) kunye ne-Deimos (ukwesaba), ngoko ke la magama anikezelwa kwinzala yomhlaba.
I-Mars iyisimboli sobundlobongela, esenza ukuba sizenzele ngokwethu, kunye nesimboso sesibindi. Kodwa konke oku kukwazi ukuguqulwa nokungaziphene: ukunyelisa, umsindo okanye ukuzidla ...
AmaYiputa adibana nalo mhlaba omkhulu kunye no-Amon, kunye namaGrike kunye noZeus. I-Jupiter ihamba ngendlela yayo iminyaka elishumi elinesibhozo, kwaye inkolelo ivakalisa oothixo abalishumi elinambini base-Olympus. Kwakukholelwa ukuba iJupiter inceda abantu bakhule, bavuselela abantu abanxanelwe ukulawula kunye nobutyebi. Eyona nto ibhetele, iJupiter ibonisa ukunyaniseka nokupha, ukusabalalisa nokunyaniseka.
Saturn (Chronos) - uThixo wexesha. Njengomthetho, ubonakaliswa ngendlela yendoda endala, ebandakanya ubugorha, ubunzulu kunye nobunzima. Indima yayo kukuvavanya abantu ngokuvavanya. Abanye bayamqonda njengonkulunkulu otyumkileyo, abanye - njengomfundisi omkhulu, okwenza isikolo esinzima kodwa sihle.
USaturn uyindodana kaGaia no-Uranus, uMhlaba kunye neZulwini. Ngokutsho kweengcamango, ulawulo lukaSaturn lwaphela xa unyana wakhe uJupiter (uZeus) wamphanga. I-Saturn ibizwa ngokuba ngumqondiso "onobungozi" kakhulu, nangona kunjalo ngamava avuselela umntu into ebalulekileyo kwaye inzulu, ngenxa yenguqu yenguqu (utshintsho) eyenzekayo ngamnye kuthi.
Uranus ngumntu wendalo kunye nendawo. Lo ngowomnye woothixo bokuqala baseRoma. Wayenxulumene noothixo wokukhanya, umgaqo obalulekileyo wokudala, ozalwa ebumnyameni. Ukuba ukhangele yonke into esuka kwingqondo yengqondo, u-Uranus uvakalisa impembelelo yokubonakaliswa kwamandla jikelele kwi-subconscious.
EGrisi, iNeptune ibizwa ngokuba nguPoseidon, wayengunkulunkulu wolwandle. I-Mythology ithi ihlabathi le-Neptune lityhila iimfihlelo zalo ezingenalwazi kuphela kubantu abangenakuqonda, kodwa ingxaki ikulindele abo bazama ukuphosa amehlo abo abanomdla okanye abanobukhwele ebungcweleni, kumntu okhohliswa ngabantu abangela amaza ePoseidon. Umntu uyisibuko seminqweno yakhe eya kuba lixhoba kwizilwanyana ezihlala kwilasha yangaphambili. I-Neptune inamathetheli ezandleni zakhe, ezibandakanya ihlabathi: iMoya, uMzimba, uMoya.
EGrisi kunye nale planethi inxulumana noothixo we-underworld kunye nehlabathi labase-Aida abafileyo. I-Pluto inesigqoko somlingo, apho angabonakali kwaye akhokele ihlabathi elingabonakaliyo. Umfazi wakhe, intombi kaDemeter, uvalele ukuthunjwa kwakhe ebusika nasekwindla, kodwa entwasahlobo nasehlobo ukhululwa eMhlabeni. Udibanisa nokuvuswa kobomi bonke. Le iplanethi ayiqondwa kakuhle, abantu abaxhomekeke kubo, iplanetar iyimfihlelo kunye nemfihlelo.
Ekupheliseni, sikhumbula amazwi kaSocrates: "Yazi wena, kwaye uyazi oothixo noBawo!"
Ukupheka okumnandi kwiipulo
Ukukhetha ukukhulelwa kwabafazi emva kweminyaka engama-35-40
Konke malunga nesifuba sam: ubuhle, ukunakekelwa, impilo
Indlela yokuthenga iikitikithi zomoya ezincinci
Intendelezo ephuzi - uphawu lwesifo esibi?
Izambatho zomtshato ezibiza kakhulu
Ukuhlolwa kwegazi jikelele: unokuthetha ntoni ngaye?
UGeorge Michael wayefunyenwe efile endlwini yakhe
Abafazi abasebenzisa imfesane Imvula yamanzi Spring 2016: iintlobo zangoku kunye neemodeli